Nahoana no Mandao an’i Shina Ny Mpandraharaha Mpanankarena Shinoa? · Global Voices teny Malagasy
Nahoana no Mandao an'i Shina Ny Mpandraharaha Mpanankarena Shinoa?
Voadika ny 07 Desambra 2012 14:33 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Español, Italiano, বাংলা, Français, English
Mandao an'i Shina ny mpandraharaha Shinoa. Araka ny fitsapan-kevitra, notarihan'ny China Merchants Bank and Bain & Co., 27% isan-jaton'ny mpandraharaha manamboloa mihoatra ny 100 arivoarivo [tapitrisa] RMB no efa nifindra monina ary ny 47% heverina fa nivoaka nankany ivelany.
Tsikaritra fa miteraka lonilony avy amin'ny olom-pirenena shinoa ho amin'ireo mpanankarena mifindra monina ny olom-pirenena Shinoa izany. Ary vao maika niteraka adihevitra sy sahotaka ao amin'ny fiaraha-monina shinoa ny nanehoana ho hita imasom-bahoaka ny fifindra-monin'ilay vehivavy mpandraharaha sady mpikambana ao amin'ny CPPCC (holafitry ny fanoloran-tsaina ara-pilitikan'i Shina) Zhang Lan faramparany teo.
Mandry andriran'antsy ara-toekarena
Manadihady ny CGazetim-boky Fandraharahana Shinoa:
Niteraka adihevitra tao amin'ny fiaraha-monina Shinoa ny fifindra-monin'i Zhang Lan. Pikantsary avy avy amin'ny tati-baovao ao an-toerana tamin'ny alalan'i Youku.
Miaritra tsy fisian'ny fiarovana azo antoka ny mpandaharaha shinoa rehetra. Vantany vao mifindra monina any amin'ny rafitra ara-toekarena hafa ry zareo dia tolorana fahafaha-mampiasa vola vaovao tsy miankina amin'ny toekarena shinoa. Mampihena ny fitaintainana ny [fampiasam-bola amin'ny toerana maro] raha oharina amin'ny fandraharahana amin'ny firenena tokana monja (Shina) izay mety tsy mitombina tsara ny politika. Amin'ny ankapobeny, manampy azy ireo hahatsapa ho mandry fahalemana izany.
Mizara hevitra mifanahaka amin'izany ny ifeng.com[zh], gazety shinoa malaza:
Tsorina, tsy manome fahafahana ny olona handry fahalemana ny fiaraha-monina shinoa. Maro ny olona no mieritreritra fa tsy mitaintaina ny mpanankarena satria tsy mila miahiahy momba ny fiarovana ara-tsosialy; saingy ny mpanankarena any Shina no tena mitaintaina kokoa. Vao haingana ny iray amin'ny mpanankarena indrindra ao Shina Liang Wengen no niteny fa an'ny firenena ny ainy sy ny fananany ary tsara tarehy kokoa ny vadin'ny mpikambana ao amin'ny antoko. Heverina ho teniteny foana izany, saingy mampiseho ny tahony. Ahoana moa no itenena-na mpandraharaha manao fanambarana tahaka izany? Samy mahalala ny mpandraharaha tsirairay fa ilaina ny fananana harena mazava hanaovana fandraharahana.
Lalàna henjana ho an'ny Orinasa Shinoa
Nasongadin'i Huang Song[zh], Sekretera-Jeneralin'ny Ivotoeran'ny Fikarohana Fampandrosoana sy ny Indostria misahana ny vola ao amin'ny Anjerimanontolon'i Peking ny antony ambadiky ny fifindra-monina:
Maro ny antony mahatonga ny mpandraharaha hisafidy ny hifindra monina. Antony roa no mampiahiahy ny hevitry ny mpiara-belona: voalohany, tsy matoky ny hoavin'i Shina ry zareo; faharoa, miezaka ny mandositra zavatra tsy ara-dalàna mihatra amin-dry zareo ry zareo. Fa misy ny antony tena lehibe hafa matetika adino [tsy raharahiana], dia ny karazan-tsakasakana sy faneriterena ataon'ny governemanta amin'ny fampiasam-bola atao any ivelany. Voalohany, noho ny fanaraha-maso ny fifanakalozam-bola amin'ny any ivelany eo ambanin'ny kaontin'ny renivola, tsy maintsy mila fankatoavana avy amin'ny Departemantan'ny Fandraharahana ny Fifanakalozam-bola amin'ny any ivelany ny fampiasam-bola ataon'ny orinasa shinoa any ampitan-dranomasina. Ary na dia somary goragora kokoa noho ny taloha aza ny politikam-pampiasam-bola, dia mbola misy ihany ny karazana fameperana ary mbola ambany fitantanana henjana ny resaka ara-bola eo amin'ny sehatra ara-bola. Faharoa, tsy maintsy mbola ankatoavin'ny Departemantan'ny Fanitsiana sy ny fampandrosoana ny fampiasam-bola any ivelany, izay miteraka fanjavozavoana betsaka amin'ny tetikasa.
Ny orinasa an'ny fanjakana sy ny orinasa lehibe ihany no tohanan'ny rafi-pampiasa-mbola Shinoa amin'ny ankapobeny. Misy ny fahasarotana amin'ny fanohanana ara-bola ho an'ny orinasa tsy miankina kely sy salantsalany: sarotra ny fahazoana mindram-bola, vao maika sarotra kokoa ny mahazo petrabola.
Nampiako izany i Yang Yongmin[zh], mpikambana ao amin'ny fila-kevi-pitantanan'ny Vondrona Offshore Incorporations manana ny biraony ao Beijing:
Tsy gaga aho raha nifindra monina any amin'ny nosy karaiba i Zhang Lan. Ny olona mahalala zavatra kely momba ny orinasa tsy miankina shinoa dia mahalala fa tsy misy ifandraisany na tsia amin'ny resaka fitiavan-tanindrazana io. Satria mora ho an'ny orinasa ny mivoaka mankany ivelany. Maro loatra ny politika tsy misy dikany izay tsy mety ho an'ny shinoa fa manome vahana ny firenena vahiny.
Nisy hevitra nivoaka tao amin'ny famoaha-kevitry ny mpamaky People's Daily hoe maninona raha manao toy ny an'ny Amerikanina manatovana hetra be amin'ny mpandraharaha mpanankarena mba tsy hifindrany monina, fa nisy avy hatrany ny mpiserasera tsy miombon-kevitra amin'izany. Nitsikera ilay mpanentana malaza ao amin'ny fahitalavitra Meng Fei hoe:
Diso lalana izany fomba fisaina izany. Firy moa ny Amerikana mpanankarena no niala tamin'ny zom-pireneny? Ny tokony heverintsika dia hoe nahoana no maro dia maro ny manampahefana, olo-malaza, mpanankarena ary mpampianatra fanta-daza te-hifindra monina, fa tsy hoe ahoana no atao isorohana ny tsy hanaovan'izy ireo izany. Rehefa tsy mieritreritra lalina momba io olana io isika dia tsy ho afa-mitazona azy ireo na dia henjana sahala amin'inona aza ny lalàna.
Nampiako i Zhi Qiangli :
Tefaka eny amin'ny endriky ny rafitra henjana ny fifindra-monin'i Zhang Lan.
Misy ihany koa ny fitsipika sy politika maro mampahasarotra ny orinasa tsy miankina shinoa hanokatra ny renivolany ho azo ampidirana petrabola nefa tsy ampiharina amin'ny orinasa vahiny izany politika izany. Angamba ny ny tenin'i Shi shusi, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Worker's Daily no mamehy tsara ny olana ilain'i Shina vahana amin'ny taompolo manaraka:
Mbola mitohy ny ady hevitra, tsy ampidirina ny resaka fitiavan-tanindrazana; lasa tantara mampihomehy mahasosotra ny vokany. Koa satria moa ny deban'ny orinasa tsy miankina iray tsy afa-manokatra ny renivolany ahafahana mampiditra petrabola aty Shina noho ny lalàna henjana sy ny fahasarotana amin'ny fahazoam-bola [indrindra ho an'ny fandraharahana vondrona restaurant iray]; saingy, ankehitriny efa nifindra monina izy, ary manam-bintana kokoa hanangana orinasa misokatra amin'ny petra-bola. Mazava loatra fa tsy tonga lafatra ny vokany ho an'i Shina, saingy iza no tompon'andraikitra tamin'izany? HIta fa mariky ny olana ara-toekaren'i Shina ny fironana goavana hifindra monina. Tsy tokony ho ny mpandraharaha no omena tsiny, nahoana no tsy ampiroboroboantsika ny marimaritra iraisana hisian'ny fanitsiana ka antsoina ny hanajana kokoa ny zom-panànan'ny tsirairay, ny fampanjakana ny lalàna ary ny fametrahana ny fifaninanana masina eto Shina?